Eedeysane Yaasiin Fareey oo loo doortey kursi Xildhibaan | KEYDMEDIA ENGLISH
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Yaasiin Fareey ayaa sida horey loo saadaaliyay kusoo baxay doorashadda Kursiga hope67, taasoo ka dhacday Maanta magaaladda Dhuusamareeb.
Doorashadda waxaa kula tartamay Musharax Malxiis ah, oo lagu magacaabey Maxamed Cali Culusow, waxaana loo diiday Kursiga inuu u tartamo Jen Tuuryare, taliyihii hore ee NISA.
Kursiga oo leh Beesha Wacaysle - Abgaal ayaa kamid ah kuraasta uu boodey Farmaajo, iyadoo ay kasoo yeertay Musharixiintii kale ee damaca uga jira cabasho xoog leh, oo aan jirin cid wax uga qaban karta.
Yaasiin Fareey ayaa geystay Dhuusamareeb askar badan oo NISA katirsan, oo ergo laga dhigay, waxaana muuqata inuu Qoor-Qoor kaalin weyn ku leeyahay boobka Kursiga lagu sameeyay.
Sharuucda doorashadda waxaa la ogaadey inay yihiin kuwa Farmaajo sida uu doono u rog-rogi karo, isagoo cidii uu raba, xitaa ay dembi leedahay ka gudbiyo, taasoo tusaale u ah Yaasiin Fareey, oo Maanta Dhuusamareeb lagu doortay.
Sida ka muuqata Shuruucda iyo nidaamka doorashadda, Musharaxa waxaa laga doonayaa inuu xilka uu hayo iska-casilo kahor inta uusan is diiwaan-gelin saddex Todobaad kahor, taasi ma uusan sameynin Yaasiin Fareey, taliyaha NISA.
Yaasiin isagoo ku eedeysan kiiska dilka Ikraan Tahliil, oo Maxkamad dacwad ka taallo ayuu is-diiwaangeliyay.
Yaasiin Farey, Fahad Yaasiin iyo Kulane Jiis waxay u tartamayaan kuraas Baarlamaan, si ay uga baxsadaan cadaaladda, oo ay u noqdaan dad leh xasaanad dowladda soo socotana u maxkamadeynin. Farmaajo ayaa ka shaqeynaya inuu dhiso raggii lasoo halgamay, isagoo ka dhigay Xildhibaanno.
Doorashadda ka socoto Soomaaliya ayaa ah mid musuq-maasuq uu hareeyay, oo aan ka jirin hufnaan, cadaalada iyo sinnaan, waxaana laga digay inay abuurto jawi qalalaase horleh.